Siyaasi Xaraare oo ka hadlay Ansixinta xeerka matalada gobalka Banaadir (dhegayso) – Radio Daljir
Siyaasi Xaraare oo ka hadlay Ansixinta xeerka matalada gobalka Banaadir (dhegayso)
Juunyo 27, 2020 6:51 g 0
Xildhibaannada golaha shacabka eee Soomaaliya ayaa maanta meelmariyey qorshe lagu siyaadinayo xildhibaannada aqalka sare ee Soomaaliya, waxaana ay ansixiyeen 13 xubnood oo loo qoondeeyey gobolka Banaadir.
Muran sharci ayaa arrinkaasi ka taagan, iyadoo doodaha qaarkood ay qabaan tallaabadaasi in aysan sharci ku dhisnayn marka laga hadlayo dastuur KMG ah ee dawladda dhexe ee Soomaaliya.
Haddaba si aan arrinkaasi wax uga ogaanno waxaana wareysi la yeelanay siyaasi Cismaan Yuusuf Xaraare oo muddo dheer ahaa mudane golaha shacab ee Soomaaliya ah, aqoon durugsanna u leh arrimaha sharciyada.
Xaraare waxaa kale oo uu ka hadlayaa, arrinka doorashada Soomaaliya oo maanta mudanayaasha golaha shacabku dhegaysteen doodda guddiga doorashada Soomaaliya oo sheegay in aysan xilligeedii doorasho ku qabsoomi karin.
Cabdifataax Cumar Geeddi oo wareystay ayaa waydiiyey sharciyadda ay ku fadhiyo siyaadinta cusub ee xubnaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya?
Guddiga hormarinta Burtinle oo dhaqaale lagu wareejiyeey (dhegayso)